Wararka Maanta: Sabti, Oct 5 , 2013-Wafdi ka socda dowladda Soomaliya oo gaaray Kismaayo iyo iska horimaad ka dhacay duleedka magaaladaasi
Ilaa imika ma cadda ujeedooyinka rasmiga ah ee imaatinka wafdigan ka socda dowladda federaalka Soomaaliya iyo AMISOM.
Masuuliyiinta maamulka Jubba weli kama hadlin imaatinka wafdigan, waxaana wafdigan uu maalintii labaad ku suganyahay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo.
Dhinaca kale dagaal qaatay saacado kooban ayaa shalay gelinkii danbe ka qarxay deegaanka Goobweyn oo qiyaastii 25 KM dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Kismaayo.
Weerarkan oo ay qaaden ciidamada maamulka Jubba ayay la beegsadeen saldhig ay deegaankaasi ku lahaayeen ciidamo uu hogaaminayo COL Barre Aadan Shire (Hiiraale), waxaana labada dhinac halkaasi ku dhexmaray iska horimaad xooggan.
Ilaa imika ma cadda khasaarooyinka rasmiga ah ee ka dhashay iska horimaadkaasi, haseyeeshee masuuliyiin ka tirsan maamulka Jubba oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in weerarkii shalay ay guulo ka gaareen, waxaana shalay gabi ahaanba hawada laga saaray isgaarsiintii magaalada Kismaayo mudadii uu socday dagaalka labada dhinac.